မောင်ချစ်: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အပုဆုံးလူသား….
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အပုဆုံးလူသား….
သူ့ အရပ်ကား ဖန်ပုလင်းထက်အနည်းငယ်သာ ပိုရှည်ပါလိမ့် မည် သို့ သော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဂျန်ရေးဘာလာဝင်း ကလေးကတော့ မကြာခင်မှာပဲ ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံး၊ ခန္ဓာကိုယ်အသေးငယ်ဆုံး ( အရွယ်ရောက်ပြီး ) လူသားဖြစ်လာတော့ မှာဖြစ်ပြီး အလွန်ကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့်၂၂ လက်မ သာအရပ်မြင့် တာမို့ သူကလေးဟာ တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ထက်ကို သေးငယ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။လာမည့် ဇွန် လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ သူ့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် မှာမို့ လက်ရှိ ( ကမ္ဘာ့ အပုဆုံး၊ လူပုလေး ) စံချိန်ထက် သူက ၅ လက်မ ပိုနိမ့် ပြီး စံချိန်ချိူးတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူပုလေးဂျန်ရေးဟာသူ့ ရဲ့ အသက်တစ်နှစ် ကနေစပြီး ခန္ဓာကိုယ်မဖွံ့ ဖြိုး၊ အရပ်မရှည်တော့ တာဖြစ်ပြီးကြာ
ကြာလည်းမရပ်နိုင်တဲ့ အပြင် လမ်းတောင်အနိုင်နိုင်လျှောက်နေရရှာပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့( အသေးဆုံး၊ အပုဆုံး ) စံချိန်ချိူးတော့ မယ့် အကြောင်းပြောပြရာမှာတော့ သူ ဟာ ပြုံးရွှင်လို့ နေပါတယ်။
” ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အသေးဆုံးလူသားဖြစ်ရမယ်ဆိုယင်တော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့ ဗျာ…” လို့ သူက
ဂျန်ရေးဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ ဝေးလံသီခေါင်သော ဇမ်ဘိုအမ်ဂါဒယ်နော့ ပြည်နယ်ရှိ ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သူ့ ရဲ့ မိဘနှစ်ဦး၊ သူ့ ထက်အသက်ငယ်သော်လည်း အရပ်ပိုမြင့် ကြသည့် ညီမ ၂ ယောက်၊ ညီ ၁ ယောက် တို့ နှင့် အတူနေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ညီမတွေဖြစ်ကြသည့်အသက် ၁၃ နှစ်ရှိ ဂျေဆယ်လ်၊ အသက် ၆ နှစ်ရှိ ဂျန်းရစ်ခ်ျ၊ ညီဖြစ်သူ အသက် ၁၁ နှစ်ရှိ ဂျေအတ် တို့ ကျောင်းသွားနေကြချိန်မှာ သူကတော့ မိခင်ဖြစ်သူ ကွန်ဆက်ပ်ဆီယွန် နဲ့ အိမ်မှာနေ
” သူ့ ကိုတစ်နေ့ လုံးတစ်ချိန်လုံးပြုစု၊ စောင့် ရှောက်နေရတာပါပဲ…ဂျန်ရေးကလေးဟာ အကူအညီပါမှသာ
လမ်းလျှောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီး နာကြင်ကိုက်ခဲနေတတ်လို့ မတ်တပ်လည်းကြာကြာမရပ်နိုင်ရှာပါဘူး…” လို့ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ ကွန်ဆက်ပ်ဆီယွန် ကပြောပြပါတယ်။ သူ့ ကို မိဘတွေက တစ်ချိန်လုံးနီးပါးပွေ့ ချီသယ်ပိုးသွားလာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်…..အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပြီ
ဖြစ်သည့် ဖခင်ဖြစ်သူ ပန်းပဲဆရာ ရေနယ်လ်ဒို ကတော့ တစ်ပါတ်မှာ ၆ ရက်လောက်အိမ်နေထွက်ခွာပြီးအဝေးမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရပေမယ့် သူအိမ်ပြန်ရောက်ယင်တော့ ဂျန်ေ၇းတစ်ယောက် သူ့ ဖခင်ရဲ့ ပခုံးပေါ်ခွစီးပြီး ရွာထဲလျှောက်သွားလည်နေရတာကိုပျော်ရွှင်နှစ်သက်လှပါတယ်။
သူမရဲ့ သား အသက် ၂ နှစ်ပြည့် ကစပြီး မဖွံ့ ထွား၊ အရပ်မရှည်လာတော့တာကို မိခင်ဖြစ်သူ ကွန်ဆက်ပ်ဆီ
ယွန် ကသတိပြုခဲ့ မိပါတယ်။ ( ထိုစဉ်က ) သူဟာအမြဲပဲနေမကောင်းဖြစ်နေပြီး အရွယ်လည်းမကြီးလာတော့တာမို့ ကျွန်မတို့ ဆရာဝန်
ဆီသွားပြကြတော့ ဆရာဝန်တွေ အံ့ အားသင့် ကုန်ကြပါတယ်…” လို့ မိခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။ ဂျန်ရေး အသက် ၁၂ နှစ်မှာတော့ ထိုဆရာဝန်ကပဲ သူ့ ကိုအားဆေးတွေတိုက်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးမလာတော့ ပါဘူး။ သူ့ ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနဲ့ ပေမယ့် ဂျန်ရေးဟာ အစားတော့ တော်တော်စားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ပေါင်မုန့် တွေစားလိုက်၊ ပြောင်းဖူးတွေစားလိုက်နဲ့ ပါပဲ။
သူ့ ရဲ့ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ နေပြီဖြစ်တဲ့ မွေးစာရင်းကသူ့ ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်းသက်
သေပြနေသလို အဲဒီအရာကလည်း သူ့ မိသားစုနေအိမ်အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွားစရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ..
သူဟာ စာရေးတာနဲ့ အရုပ်ဆွဲတာတွေလေ့ လာသင်ယူနေပြီး မိသားစုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိူးမွေးမြူရေးလုပ်
ငန်းမှာ တတ်နိုင်သလောက်လေးတော့ ကြက်စာကျွေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါသေးတယ်…
” တစ်ခြားကလေးတွေကျောင်းတက်ချိန်မှာ အလုပ်လေးဘာလေးလုပ်ချင်ပေမယ့် ဂျန်ရေး ကိုလည်းပစ်ထား
ခဲ့ လို့ မရပါဘူး…. ကျွန်မသူ့ ကို သားဟာအခုဆိုကမ္ဘာမှာ အသေးဆုံးလူဖြစ်နေပြီလို့ ပြောတော့ သူက ဂုဏ်
ယူတဲ့ အပြုံးနဲ့ ပြုံးပါတယ်…” လို့ မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်…
မှတ်ချက်။ ။ မေလ်းထဲကရ ထို့ ကြောင့်ပြန်ရှဲ ။ ။
ရေးသူ မောင်ချစ် အချိုန် 02:34